दुई दिन घटेको बजार १३.०७ अंकले बढ्यो, लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाए
पुस २२, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक १३ दशमलव शून्य ७ अंकले बढेर बन्द भएको छ । यो दिन परिसूचक २ हजार १७८ दशमलव ५७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।
उता सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४ दशमलव ४५ अंकले माथी उक्लिएर ४१८ दशमलव १४ विन्दुमा पुगेको छ । आइतवार उच्च अंकले बढेको बजार त्यसपछिको दुई कारोबार दिन भने सामान्य अंकले घटेको थियो । गत साताको सोमवारदेखि बढेको बजारबाट अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गर्दा दुई दिन बजार प्रभावित भएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिन लाग्दा धेरै जसो सूचीकृत कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्रै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन् । कम्पनीहरुको प्रस्तावित लाभांश र बुक क्लोज पछि सस्तो मूल्यमा शेयर खरीद गर्न पाउने कारण केहि समय कारोबार रकमले पनि उचाई लिइरहेको थियो ।
पछिल्लो समय भने कारोबार रकम घट्दै गएको छ । केहि समयअघि रू.९ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको बजारमा पछिल्लो समय कारोबार रकम बढीमा रू. ६ अर्बसम्मको भएको छ । बुधवार भने रू. ४ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख ७२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यो दिन २०५ ओटा कम्पनीको ४० हजार ३६७ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड ५ लाख ३५ हजार २१६ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । बुधवार सर्वाधिक रकमको कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको भएको छ । यस कम्पनीको रू. २१ करोड ३३ लाख ८६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता रू. ४ ले घटेर रू. २ हजार ३८४ कायम भएको छ । नेपाल लाइफको न्युनतम २ हजार ३७६ देखि अधिकतम २ हजार ५०७ सम्ममा ८९ हजार ४१३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
बुधवारको कारोबारमा व्यापारिक समूह र जलविद्युत् समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ । यो दिन व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत र जलविद्युत समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो । यस दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव १५ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत , बैंकिङको शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र म्यचुअल फण्डको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
यस दिन कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्तको ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, स्वाभिमान लघुवित्तको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत, नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९६८ पुगेको हो भने जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १९८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार १७९ पुगेको हो । त्यस्तै स्वाभिमान लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १३३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४६८ , नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिकित्ता रू. ५२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५७५ र प्रभु लाइफको प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १७३ कायम भएको हो ।
प्रभु लाइफको कारोबार खुला भएको चौथो दिन सर्किट लेभलमा मूल्य बढेको हो । यो दिन जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १११ कायम भएको हो ।
पुस महीनाको अन्तिम दिन बजार १८.८१ अंक बढेर बन्द, १० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि [२०७७ पौष, २९]
९ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य ९ % भन्दा बढीका दरले वृद्धि[२०७७ पौष, २९]
२२८९.६९ विन्दुमा नेप्से, करीब ४ अर्बको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७७ पौष, २९]
२८.१० अंकले बढेको बजारमा अपर तामाकोशीको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७७ पौष, २९]